Previous Article E Jidela Nwa Ahọ Iri Na Atọ Na-Ezu Ohi n'Awka
Next Article Ndị NDLEA Anwụchikọọla Mmadụ Iri Asatọ n'Anambra Maka Ọgwụ Ike
Onyeisi ndị uwe ojii na steeti ahụ maka nhọpụta ọchịchị, bụ maazị Rabiu Ladodo mere ka a mara nke a n'okwu ọ gwara ndị nta akụkọ n'isi ụlọ ọrụ ndị uwe ojii na steeti ahụ dị n'Amawbịa, banyere nhọpụta ahụ. O mere ka a mara na ụfọdụ n'ime ndị ahụ bụ ndị e jidere n'ihi imabu igbe e ji atụ akwụkwọ, ebe ndị ọzọ bụ ndị e jidere n'ihi imebisi ihe e ji atụ akwụkwọ, ịsunye ọgba aghara n'ebe a na-atụ akwụkwọ, ịrị ọrụ akpụ obi, na ọtụ ihe ndị ọzọ dị otu ahụ.
O kwuru na ihe a napụtara n'aka ndị ahụ gụnyere: ụgbọala abụọ, ọgbaa tùmtùm abụọ, akwụkwọ abụọ e ji eme ntụli aka, igbe akwụkwọ a tụrụ atụ dị atọ, mma ekwu, tinyere akwụkwọ kpọrọ nkụ a na-enyo enyo na ọ bụ ọgwụ ike Cannabis Sativa, ma kwuo na a ga-akpụpụ ndị ahụ ụlọ ikpe ma were ùsòrò iwu nyụchaa ha anya, ma e mechaa nnyocha miri èmì bànyere nke ahụ.
Maazị Ladodo tòrò ndị Anambra maka ịpụta n'uju ma sonyesie ike na nhọpụta izugbe ahụ, bụ nke o kwuru na ọ gara nnọọ nke na-enweghị oke akụkọ ọjọọ na ihe ọdachi so ya. Ọ tụụrụ ndị otu ndọrọ-ndọrọ dị iche iche nwetara mmeri na ya bụ nhọpụta mmamma, kpọkuo ndị nke na-enwetaghị ka ha kara obi chere oge ọzọ, ma dụkwazie ndị nke na-ekwenyeghị na mpụtara nke ya bụ nhọpụta ka ha wega mkpesa ha niile n'ụlọ ikpe ma were usoro iwu chụsoo ya, karịa iji aka ha bụrụ onye ikpe, isunye ọgba aghara, ma ọ bụ itinye aka n'ihe dị iche iche na-ezighị ezi, n'ụzọ igosipụta obi mwute ha ma ekweghị ekwe ha.
O tòkwara ndị òtù ọrụ dị iche iche sonyere na ya bụ nhọpụta nakwa ndị tinyere aka n'ụzọ pụrụ iche iji hụ na ya bụ nhọpụta, bụ nke o kwuru na e mere n'ụzọ udo na steeti ahụ, bụ ebe o kwuru na e nweghị ọbụnadị naanị otu onye tụfuru ndụ ya.